Alshabaab waxay Kenya ka fuliyeen weerarkii 11aad laba bil gudahooda “3Macalin ayaa la dilay”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Inta la hubo 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay midna waa la afduubtay kaddib weerar la tuhunsan yahay in Ururka Alshabaab kadambeeyo kaas oo saaka aroortii hore dabley hubeysani k qaaday deegaanka Kamuthe oo katirsan ismaamulka Gaarissa ee dalka Kenya.
Sida uu shaaciyey taliyaha guud Booliiska gobolka Waqooyi bari Paul Soi Alshabaab ayaa weerarkan ku dilay sadex macalin iskuul, sidoo kale waxa ay gubeen Saldhigii ciidanka booliska ee deegaanka ku yaalay, iyaga oo khasaare u geystay oo burburiyay qalab shirkad isgaarsiineed oo deegaanka Kamuthe kahowgasha.
Paul Soi ayaa sheegay in dableyda weerarka geysatay ay bartilmaameedsanayeen dhismayaasha isgaarsiinta iyo xarumaha Booliiska ayna qayb ahaan burburiyeen xarun isgaarsiineed oo kutaal deegaanka Kamuthe ee ismaamulka Gaarisa.
Ururka Alshabaab ayaa 11 weerar ka fuliyay lixdii isbuuc ee la soo gudaha gobolka Waqooyi Bari Kenya, kuwaas oo kala dhacay deeganada Gaarisa oo ay 4 weerar kadhacday, Wajir oo 3 weerar lagu qaaday, 2 Madhera kadhacday, iyo Lamu oo 2 weerar ah.
ISHA: Daily Nation & Capital News-Kenya
Previous articleBanaanbaxyo kadhan ah Ruuxaani iyo Khumayni oo maalintii labaad kasocda Tehran.
Next articleDowladda Somalia oo awoodeeda isugu geyneysa baajinta khudbadda CCWarsame ee Malaysia.